Ubuntu 20.04.3 LTS inouya neLinux 5.11, Mesa 21.0, inogadziridza uye nezvimwe | Kubva kuLinux
Ubuntu 20.04.3 LTS inouya neLinux 5.11, Mesa 21.0, inogadziridza uye nezvimwe
Darkcrizt | 07/09/2021 00:39 | Kugoverwa
Iko kutsva kwe Ubuntu 20.04.3 LTS yakatoburitswa kare ita mazuva akati wandei mairi shanduko dzakanangana nekuvandudzwa kwesoftware kutsigirwa kwakabatanidzwa, Linux kernel uye graph stack stack inogadziridza, inosimudza uye bootloader bug fixes.
Uyewo inosanganisira zvinyorwa zvitsva zvemazana mazana emapakeji kugadzirisa kusagadzikana uye kugadzikana nyaya, pamwe nezvimwe zvakagadziriswa zvinoburitswa Ubuntu Budgie 20.04.3 LTS, Kubuntu 20.04.3 LTS, Ubuntu MATE 20.04.3 LTS, Ubuntu Studio 20.04.3 LTS, Lubuntu 20.04.3 LTS, Ubuntu Kylin 20.04.3. 20.04.3 LTS uye Xubuntu XNUMX LTS.
Iyi yechitatu poindi vhezheni inounza pamwechete ese masoftware ekuburitswa aburitswa parizvino, pamwe neakasiyana ekuchengetedza zvigamba uye akawandisa mabug fixes.
1 Main nyowani maficha eUbuntu 20.04.3 LTS
1.1 Maitiro ekuvandudza kune iyo nyowani Ubuntu 20.04.3 LTS kugadzirisa?
Main nyowani maficha eUbuntu 20.04.3 LTS
Ubuntu 20.04.3 LTS inosanganisira zvimwe zvekuvandudzwa kweUbuntu vhezheni 21.04 yatinogona kuona kuti iyo yekuvandudza yakagadzirirwa mapakeji pamwe neiyo kernel vhezheni 5.11, kubvira Ubuntu 20.04 uye 20.04.1 yakashandisa kernel 5.4 uye 20.04.2 yakashandisa kernel 5.8.
Senguva dzose, HWE (Hardware Enablement Stack) yakagadziridzwa nekuuya kweLinux kernel 5.11 Iyi vhezheni inosanganisira kuwedzeredza kwakati wandei kuBtrfs, kuburitsa pachena nzira dzekushandisa paunenge uchidzosera data kubva kune rakakanganisika mafaera masisitimu, pamwe nekubvisa rutsigiro rweyakambodzikiswa gomo sarudzo "inode_cache" peji (PAGE_SIZE), pamwe nerutsigiro rwekunatsa nzvimbo.
kunze kwaizvozvo chishandiso chitsva chakawedzerwa kubatisisa system kufona, zvichibva pa prctl () uye izvo zvinobvumidza kukanda kusarudzika kubva kumushandisi nzvimbo kana uchiwana yakatarwa sisitimu yekufona uye kuteedzera kuitiswa kwayo. Uku kushanda ndiko yakakumbirwa muWine uye Proton kutevedzera maWindows system mafoni, izvo zvinodikanwa kuti uone kugarisana nemitambo uye zvirongwa zvinonyatso kuitisa system mafoni pasina kupfuura kuburikidza neWindows API.
Zvekuvakwa RISC-V, rutsigiro rweContiguous Memory Allocator memory allocation system yakawedzerwa (CMA), iyo yakagadziridzwa kupa makuru akakomberedza ndangariro nzvimbo uchishandisa peji kufamba maitiro. YeRISC-V, kune zvakare maturusi akaisirwa kudzora kupinda kune / dev / mem uye ku account yekukanganisa nguva yekugadzirisa.
Padivi revatariri tinogona kuwana Tafura 21.0, kunze kwaizvozvo futi desktop nharaunda yakagadziridzwa neGNOME Shell 3.36.9, LibreOffice 6.4.7, Mozilla Firefox 91, GCC 10.3.0, Python 3.8.10, containerd 1.5.2, ceph 15.2.13, snapd 2.49, cloud-init 20.4, uye mamwe masisitimu ekushandisa.
Pane chikamu chezvikamu zvegrafiki stack yakagadziridzwa, inosanganisira X.Org Server 1.20.11 uye Mesa 21.0, yakaedzwa neiyo Ubuntu 21.04 vhezheni. Shanduro nyowani dzevatyairi vhidhiyo dzakawedzerwa zveIntel, AMD uye NVIDIA machipisi.
Yesevha masystem, kernel nyowani yakawedzerwa sesarudzo mune yekumisikidza, pamwe nemagungano matsva zvino achashandiswa kumisheni mitsva chete: masisitimu akaiswa kare anogona kugamuchira shanduko dziripo muUbuntu 20.04.3 kuburikidza neyakajairwa yekumisikidza yekuisa system.
Tinofanira kurangarira izvozvo inoenderera yekuvandudza modhi yekutsigira inoshandiswa kuendesa nyowani kernel shanduro uye giraidhi yemifananidzo, iyo yakadzoserwa kumashure tsanga uye madhiraivha anotsigirwa chete kusvikira anotevera Ubuntu LTS bazi chigadziriso chinoburitswa. Semuenzaniso, iyo Linux kernel 5.11 yakarongedzwa mukuburitswa kwazvino inotsigirwa kusvika kuUbuntu 20.04.4, iyo ichapa iyo Ubuntu 21.10 kernel. Pakutanga kutumirwa, hwaro 5.4 kernel inotsigirwa kweiyo yakazara-makore mashanu ekuchengetedza kutenderera.
Kusiyana neshanduro dzekare dzeLTS, shanduro nyowani dzekernel uye graphical stack ichabatanidzwa mukumisikidzwa kweUbuntu Desktop 20.04 nekukasira, uye haisi kupihwa nenzira yesarudzo. Kuti udzokere kumashure kune base kernel 5.4, mhanyisa iwo murairo:
Maitiro ekuvandudza kune iyo nyowani Ubuntu 20.04.3 LTS kugadzirisa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Ubuntu 20.04.3 LTS inouya neLinux 5.11, Mesa 21.0, inogadziridza uye nezvimwe
MX-21 Beta 2: Shanduro nyowani inowanikwa yeMX Linux 21 - Flor Silvestre